Daniel Martín Serrano. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Insomnia | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Daniel Martin Serrano emeela ka ọ bụrụ akwụkwọ edemede na aha ojii, Insomnio. Mana Madrilenian a nwere ogologo akụkọ ihe mere eme dị ka usoro edemede telivishọn so na Hospitallọ Ọgwụ, Velvet, Kpuru ìsì na nhọpụta, Onye isi, Ndahie y Oke osimiri. Na mgbakwunye, ọ bụ prọfesọ nke Akwụkwọ akụkọ Television na Madrid Film School. Na nke a Ajụjụ ọnụ Ọ na-agwa anyị gbasara akwụkwọ akụkọ ya na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwere m ekele maka obiọma na oge na ọ raara m nye.
Daniel Martín Serrano - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ TAA: Nzuzo, egwu na usoro edemede ma ọ bụ usoro ọhụụ na usoro?
DANIEL MARTÍN SERRANO: N’ikpeazụ ọ bụ ịkọ akụkọ. Usoro dị iche iche, ee, mana ihe na-eme ihe kachasị iche edemede maka akwukwo bụ ụzọ ọrụ. Ederede ederede bụ mgbalị otu ndị ọtụtụ mmadụ na-esonye ma nwee echiche nke ndị na-emepụta, netwọkụ na nyiwe, yabụ eme ọtụtụ mkpebi ọnụ. Mgbe enwere m akwụkwọ akụkọ, ọ bụ naanị m na-eme mkpebi ndị a, ọ bụ m na-ekpebi ihe na-eme na otu o si eme. Ma n'adịghị ka ụzọ esi arụ ọrụ na edemede, oge ụfọdụ nnwere onwe nke akwụkwọ akụkọ ahụ nyere m nwere ekele.
Ma enweghị m mmasị maka edemede ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ahụ, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ọ na-esiri m ike ịhọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ. Ọtụtụ oge obu akuko ichoro igwa ya na-ekpebi etu o si acho, ọ bụrụ n'ụdị edemede, akwụkwọ ọgụgụ, akụkọ na ọbụlagodi egwuregwu.
AL: Site na ọrụ dị ogologo dị ka onye na-ede ederede, ị na-emezi mbụ gị na akwụkwọ dị ọcha ma dịkwa mfe yana akwụkwọ akụkọ na agba ojii, Insomnio. Gịnị kpatara gịnị na gịnị ka anyị na-ahụ na ya?
DMS: Dika ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla mmadụ na-atụ aro nsogbu ọhụrụ na ide akwukwo a bu nkem. Mgbe ọtụtụ afọ na-ede edemede ma malite akwụkwọ ụfọdụ m kpebiri na m ga-agwụcha, gosi m na o nwere ikike ime ya. Nke ahụ bụ ihe mbụ kpaliri m. Inwe ike bipụta ya ugbua karịrị ihe mbụ m tụrụ anya ya.
En Insomnio onye na-agụ ya ga-ahụ a akwụkwọ akụkọ ojii, ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, nke nwere nkata abụọ, onye aguru n'oge gara aga na ọzọ na ugbu a. Na nke mbụ, onye protagonist, Thomas Abad, bụ onye nyocha nke onye uwe ojii na-ahụ maka ịchọta egbu egbu nke ụmụ nwanyị dị iche iche. Ka ikpe ahụ si gaa n’ihu ị ga-achọpụta nke ahụ nwanne ya bụ n'ụzọ ụfọdụ tinyere. Gbalị ichebe gị ga-akwụsị ọrụ gị.
N'ebe a, Tomás na-arụ ọrụ abalị dị ka onye nche site na ebe a na-eli ozu na ebe ahụ, nke onye na-ezobe na ndò na-amaja, ọ ghọtara na ikpe ahụ emebeghị.
Insomnio bụ akwụkwọ ọgụgụ na a ibé na hooking ọzọ na ndị ọzọ nke ahụ anaghịkwa enye onye na-agụ ya oge. Nwere a ezigbo ikuku, agwa ndu nke ndi batara na nkpuru obi gi na, o zighi ezi ka m kwuo ya, mana o di edere nke ọma. Ugbu a ọ ga - abụ ndị na - agụ akwụkwọ ga - ekpe ya ikpe.
AL: inglaghachi azụ n’oge, ị chetara akwụkwọ mbụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
DMS: Agụm mbu m, dịka nke ọtụtụ ndị nke ọgbọ m, bụ akwụkwọ dị na nchịkọta B.Bowta Steam, Ise, Jules Verne, Agatha Christie...
Maka ihe izizi m dere enweghị m nchekwa nchekwa, amaara m nke ahụ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ichoro ide ihe eji kwụpụta. Nke nta nke nta, ee amalitere m ide akụkọ ma si otú ahụ na-eke ihe ụdị ụfọdụ nke mkpa nke duru m ide karia. Pessoa kwuru na idegara ya akwụkwọ bụ ụzọ ọ nọrọ naanị ya ma ekwenyere m na nkwupụta ahụ.
AL: Akwụkwọ ahụ metụrụ mkpụrụ obi gị aka bụ ...
DMS: Ọtụtụ. Enweghị m ike ịhọrọ otu. Akwụkwọ ndị ahụ m maara banyere ọrụ nke onye edemede dere n'azụ ha akara m. Enwere m ike ịkpọ gị Akwuru anu, site na Cela, Soft bụ abalịby Onyeka Onwenu, Obodo na Nkịta, nke Vargas Llosa, Ikwu okwo, nke Highsmtih, Nefando nke Mónica Ojeda dere, imirikiti akwụkwọ Marías ...
AL: Na onye edemede kachasị amasị ma ọ bụ mmụọ nsọ? Nwere ike ịhọrọ karịa otu na site na oge niile.
DMS: Ikekwe ọ bụ Javier Marias onye edemede m nwere ike ikwu ihe kachasị emetụta m. Amalitere m ịgụrụ ya akwụkwọ n’oge ahụ mgbe ọ malitere ido anya na achọrọ m ịrara onwe m nye ide. Uzo ya, uzo o si ekwu ihe m bu ihe m bu n’obi. Mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ: Vargas Llosa, Garcia Marquez, Lobo Antunes, Richard Ford, Patricia Onye ọkaibe, Joyce carol kwuru, Sofi Oksanen, Martin Gaite, Dostoevsky, Pessoa...
AL: Kedu onye edemede ị ga - achọ ịhụ ma mepụta?
DMS: Akwụkwọ akụkọ m na-agụkarị ọtụtụ bụ Akwa Gatsby ọ bụkwa otu n’ime mkpụrụedemede kachasị amasị m n’edemede. Ọrụ Fitzgerald niile jupụtara na mkpụrụedemede nwere ọtụtụ ọkwa ịchọrọ ịchọpụta na ọgụgụ ọhụụ ọ bụla. Gatsby bụkwa akara m kacha amasị m.
DMS: Enweghị m mania ọ bụla ama ama mgbe ọ na-ede ihe. Ihe m nwere ike ikwu bụ na Eji m akọ na uche m ike, ede m ma degharịa ọtụtụ rue mgbe afọ juru m na nsonaazụ. Adịghị m onye edemede ngwa ngwa, echere m ma na-atụgharị uche nke ukwuu banyere usoro iji mee ma na akwụkwọ akụkọ ma na ederede n'ihi na m kwenyesiri ike na ezigbo ọrụ na-akwụ ụgwọ dị mma.
Ma ọrụ nke ide akwụkwọ ka bụ ọrụ na, dịka otu a, Ana m agbali ide kwa ụbọchịM nwere oge m, anọghị m n’otu n’ime ndị mmụọ nsọ na-ebufu, ọ na-adị obere. Ọzọkwa Achọrọ m inwe ọtụtụ ọrụ aka n'otu oge ahụYa mere, mgbe ọ bụla m rapara n'ahụ otu, enwere m ike ịhọrọ nke ọzọ ma gaa n'ihu. Ọ bụ ụzọ kachasị mma iji merie mkpọchi ahụ, ịhapụ akụkọ ndị ahụ izu nwa oge.
Y n'oge a na-agụ ihe ma eleghị anya, naanị ihe omume ntụrụndụ m nwere ike inwe bụ nke ahụ achọrọ m ịgbachi nkịtị, Onweghị ihe ga-emegharị m anya.
DMS: Ana m edekarị n'ụlọ, ma site n’oge ruo n’oge m na-achọ ịgbanwe ịga a cafeteria, otu ọbá akwụkwọ. Mgbanwe ahụ nke mma, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, Ọ na-enyere m aka ịpụ n’èzí na ịghara inwe mmetụta ị na-eme mgbe niile na-arụ ọrụ n'otu ebe. Ọ bụ eziokwu na ọrịa a agbanweela omume a maka m, mana m nwere olile anya n'oge ụfọdụ ka m nwee ike ịmaliteghachi ya.
AL: Moredị edemede ndị ọzọ na-amasị gị?
DMS: Eziokwu ahụ m dere na mbụ bụ nke mpụ ma ọ bụ ụdị mpụ apụtaghị na ọ bụ ụdị ọkacha mmasị m, n'eziokwu, abughi m nnukwu onye na-agụ akụkọ gbasara mpụ. N'ezie ihe na-amasị m, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ bụ eziokwu, ndi bu ezi akwukwo. Kedu akwụkwọ dị mma maka m? Onye ị gụchara ya, ị mara na ọ ga-esoro gị oge ndụ gị niile, nke m na-achọpụta na n'azụ na e nwere ezigbo onye edemede na m na-ahụ ọrụ nke akwụkwọ akụkọ ahụ nwere, nke na-eme ka m chee echiche, na-eme ka m nwee mmetụta. Ezi akwukwo bukwa nke na eweputa ekworo na m, ezigbo anyaụfụ, maka amataghị ma otu ụbọchị m ga-enwe ike ide ụdị ihe a.
AL: Ọgụgụ gị ugbu a? I nwekwara ike ịgwa anyị ihe ị na-ede.
WMD: Agụ na-agbakọta, M na-azụta karịa oge m nwere ịgụ. M na-abịakarị ọdụ maka ozi ọma ugbu a ana m agụ ya Bertha Island, nke Javier Marías, ma enwere m ọtụtụ ndị ọzọ nọ n’elu tebụl na-eche oge ha.
Banyere ihe m na-ede, ugbu a abụ m na-arụ ọrụ na usoro nke m na-enweghị ike ịkọ ọtụtụ ihe gbasara ma nke ahụ ga-ahụ ìhè n'afọ na-abịa na gbalịrị ịkpụzi ihe m ga-achọ ka ọ bụrụ akwụkwọ m nke abụọ. Mgbanwe nke ndekọ, akwụkwọ chiri anya na nke onwe nke na-ekwu maka ịhụnanya, ọ bụghị akwụkwọ ịhụnanya, kama akwụkwọ ọgụgụ banyere ịhụnanya na otu anyị si aghọta ma ọ bụ bie ya n’ime afọ niile, malite n’oge uto ruo n’ihe anyị na-akpọ etiti.
WMD: Ihe mgbagwoju anya. Echere m na e nwere ụdị ngwa ngwa nke ịchọ ibipụta ya mgbe ụfọdụ ihe ka ya mkpa chọrọ ide. Akwụkwọ ọ bụla, ma ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ, edemede, ma ọ bụ ụdị ọzọ ọ bụla chọrọ oge ọrụ, ọtụtụ ederede na idegharị ya na-enye m mmetụta na e bipụtara ha yana, karịa ihe niile, akwụkwọ akụkọ ndị anaghị arụ ọrụ zuru ezu bụ bipụtara onwe ya.
Ebumnuche maka ndị dere bụ ibipụta, n'ezie, mana onye edemede ga-achọsi ike n'onwe ya, ọ bụghị naanị ihe ọ bụla bara uru ka ebipụta ya n'agbanyeghị otu onye chọrọ ya, ị kwesịrị iwelata ego gị karịa mgbe ị na-ede ihe. Uzo ozo n’adighi nma dika edeputara ya ugbua bu ihu ka ezigbo akwukwo esi amaghi nke oma na ndi ozo n’abughi nke oma n’agha. Mgbe ụfọdụ nkwalite na ntanetị mmekọrịta na-arụ ọrụ karịa ogo akwụkwọ akụkọ n'onwe ya. Olile anya na mgbanwe a.
AL: you ga-eche n'echiche ederede maka oge dị mkpa anyị bi na ya? Nwere ike ịrapara na ihe dị mma ma ọ bụ bara uru maka akụkọ ọdịnihu?
DMS: A na-enwekarị akụkọ banyere ụdị apocalyptic nke, na nke a, bụ ezigbo nso anyị na ha. Ọ bụ eziokwu na ibi na ya na onye mbụ dị iche, mana ọ bụrụ na m ga-anọnyere ihe dị mma, ọ bụ ya ikike nke ntachi obi uche nke anyị niile mụtara ịzụlite. Ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ ọ dị ka mmadụ eruola oke nke ịnọ iche, ike agwụla ya na ịhụghị njedebe nke nro a. Mana echere m na, na mkpokọta, onye ọzọ onye na-amachaghị etu esi emeso ya n'ụzọ kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Daniel Martín Serrano. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Insomnia